रामधुनी चोरी प्रकरण ; जे भन्छन घटनास्थलका पहिलो ब्यक्ति, के हो घटनाको यथार्थ ?
स्थानीय - असार ४, २०७६, बुधबार, रामधुनी
सधैझैँ करिब बिहान ७ बजे आर्यन कलेक्सनका कर्मचारी सङ्कर गुप्ता पसलमा आए र पसल खोले । कहिले कसको पालो कहिले कसको हिजो मङ्गलबार बिहान आर्यन कलेक्सन र त्यो सँगैको अर्को फेन्सिपसल अक्स कलेक्सन खोल्ले जिम्मा सङ्करको थियो ।
सोमबार साझ सम्म काम गरेर घर फर्किएका सङ्करले बिहान जव पसल खोले तब टेबुलभरी अस्वभनिय छरफस्ट सामान देखे । उनले अचम्म मान्दै हेरे पैसा राख्ने गल्ला पनि उखारै थियो । त्यसपछि उनलाई झन सङ्का थपियो । उनले पसलको माथिल्लो तलामा गएर हेरे । त्यहाँको अबस्थालाई हेर्दा पनि उनलाई चित्त बुझेन । उनी अझै माथिल्लो तलामा गए । जव सिरानको तलामा उनी पुग्दा त्यहाँको भेन्टिलेसन फोरिएको थियो ।
अघिल्लो दिन बन्द भेन्टिलेसन एकाएक फोरिएको देख्दा उनलाई चोरीको पूर्ण सङ्का भयो । उनी त पसलका कर्मचारी मात्र हुन उनले हतारहतार ब्यवसायी कमल शाहलाई फोन गरे र पसलको यथार्थ जानकारी गराउँदै चाडो आउँन आग्रह गरे ।
कमलले हतारहतारमा आएर हेरे पसलको अबस्था हेर्दा उनलाई अचम्म लाग्यो । उनको परिवारका अरु सदस्य पनि दौडिए । चोरीको घटना थाहा पाउँना साथ उनीहरुले वरपर होहल्ला गरे ।
पल्लो पसलमा हेर्दा बजरङ्ग फेन्सि पसलको सिरानमा पनि भेन्डिलेसन फोरिएको थियो । उनीहरुले होहल्ला गर्दागदै बजरङ्ग फेन्सि पसल खोल्नका लागि श्याम राउत आइसकेका थिए ।
उनले पनि पसल खोले तर पसल खोल्दा त्यहाँ पनि सरसामानको अबस्था अस्वभनिय थियो । टेबुलमा सामान थिएन । त्यसपछि उनको आँखा एकाएक घडि भएको ठाउँमा पुग्यो । निकै मूल्य पर्ने भित्ताको घडि पनि चोरी भएको रहेछ ।
भित्र जादाँ लुगा पनि चोरी भएको रहेछ । माथिल्लो तलामा जाँदा लेडिज लुगाका आइटम पनि छैनन् । क्रमश तला चड्दै जादा कतै ढोका फोरेको देखियो । दराज पनि फुटेको छ । पसलमा राखेको मोवाइल पनि छैन ।
बेलुका जस्ताको त्यस्तै छाडेर हिडेको पसल बिहान खोल्दा एकाएक यसरी भताभुङ्ग हुँदा उनीहरु आत्तिए । यतिकैमा करिब ७ बजेर ४५ मिनेट गाइसकेको थियो । त्यसपछि प्रहरी आयो र घटनलाई नियाल्यो अनि आफ्नो कानुनी प्रकृयाका लागि मुचुल्का पनि उठाएर लगेको प्रत्यक्षदर्सीहरुले बताए ।
त्यसैगरी उनीहरुले चोरी भएको दावी सहित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी समेत दिएका छन् ।
कति भयो पसलमा क्षति ?
१.आर्यन र अक्स कलेक्सन ः आर्यन र अक्स कलेक्सन एउटै घरमा छ । दाजुभाईकै पसल भएको कारण उनीहरुले एउटै घरमा पसल चलाउँदै आएका छन् । उनीहरुको दुइवटा पसलबाट ५५ हजार नगद, ८ तोला चाँदि, सहित करिब ४ लाख मूल्य बराबरको सामान चोरी भएको पसलका संञ्चालक कमल शाहले जानकारी दिए ।
२. बजरङ्ग फेन्सि ः त्यस्तै छेउकै आर्को पसल बजरङ्ग फेन्सिबाट सुनको गहँना, नगद ८ हजार, घडि, मोवाइल सहित करिब ३ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको क्षति भएको संचालक महेश्वर प्रसाद राउतले जानकारी दिए ।
सुरक्षानिकाय र सिसिक्यामेराको औचित्य के ?
चोरी र अपराधका घटना हुन नदिन भनेर नै झुम्कामा सिसिक्यामेरा जडान गरेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । क्यामेरा लाइसकेपछि चोरीमा नियन्त्रण हुँनुको सट्टामा झनझन बढ्दै गएको छ । केहि समय अगाडि पनि दक्षिणकाली सुनपसलमा यहि प्रकृतिको चोरी भएको थियो । भेन्डिलेसनबाटै पसेर चोरले गहना लगाएका सामान चो¥यो तर हाल सम्म चोर भने पत्तालाग्न सकेको छैन ।
झुम्कामा सुरक्षाका लागि भन्दै घट्नास्थलबाट करिब २०० मिटरको दुरीमा अस्थाइ प्रहरी बिट राखिएको छ । त्यसमा पनि घटनास्थल भन्दा करिब १०० मिटरको दुरीमा चौबिसै घण्टा प्रहरी ड्युटिमै देखिनेगरेको छ । १५ लाखको लागतमा बजारभरी लगाइएको सिसिक्यामेरा र सुरक्षानिकाएको उपस्थिति रामधुनीवासीका लागि बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको पिडित ब्यापारी अञ्जए शाह बताउँछन् ।
के गदैछ प्रहरी ?
प्रहरीले चोरीको घटना प्रति गम्भिर चासो देखाएको र यो घटनामा केहि सङ्केतहरु देखिएको भन्दै सुरक्षा निकाएको तर्फबाट अनुसन्धानमा कुनै कसर बाकी नराख्ने इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीले जनाएको छ । घटनाको प्राबिधिक पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै करिब ४ दिन पछाडि केहि सङ्केतहरु देखिन सक्ने कार्यलय प्रमुख इन्सपेक्टर जितेस दाहालले बताए ।
जनताले तपाइँहरुको सुरक्षामा प्रश्न उठाउँन थालेनी भन्ने प्रश्नको जबाफ दिदै दाहालले यो प्रश्न स्वभाविक भएको तर प्रहरी एक्लैले मात्र यस्ता घटना नियन्त्रणमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै समुदाय पनि जागरुप भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
समाधानको उपाए के ?
बारम्बार हुँने गरेका चोरी र अपराधका घटनामा सुरक्षाकर्मिलाई मात्र दोष थोपरे आफु पन्छिन खोज्नु नाजाएज कुरा हो । प्रहरी सुरक्षा दिन बसेको सरकारी संयन्त्र भएको कारण बढि सम्बेदनशिल हुँनुपर्ने पक्क हो । तर समाजमा घट्ने हरेक अपराधका घटनामा प्रहरी सँग सहकार्य गर्दै समाजका बुद्धिजिवि, राजनितिक दलका नेता र आम समाजले घटना नियन्त्रणका लागि भुमिका खेल्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । सबै मिलेर सहकार्य गरे भोलिका दिनमा यस्ता घटना नियन्त्रणमा पक्कापनि सफलता हात पर्नेछ ।
गएको सोमबार बेलुका राति रामधुनी नगरपालिका स्थित झुम्का बजारको आर्यन कलेक्सन, अक्स कलेक्सन र बजरङ्ग फेन्सी गरि तिन ओटा पसलमा चोरी भएको थियो ।